तिम्रो माथि चढ्न आएको हो र ?
यो पटकको काठमाडौं बसाइ अनौठो लाग्दो भयो । बिभिन्न साथीहरुको बसोबास र उनिहरुसँगको कुराकानीबाट काठमाडौंका कथा ब्यथा सुन्न पाइयो । ४ बर्ष पहिले मिनभबन कलेजमा पढदाको भक्तपुरको साथी बिपेशलाई भेट्ने मौका पनि यस्पटक मिल्यो । उसले रत्नपार्कमा भेट्ने कुरा गरेपछी म हान्निदै रत्नपार्कमा पुगे । उसले मलाई नै पर्खेर बसिरहेको थियो । ४ बर्ष पछीको उसको र मेरो भेट आँफैमा एक अपत्यारिलो सत्य झै लाग्यो । उससँग गरिएका थुप्रै कुराहरु रोमान्चक थिए नै । तर त्यो भेटको अघिल्लो रातको कुरा मलाई अझ बरु रोमान्चक लाग्यो । उसले आफुले ठमेलको पीस फेवा नामको एक गेस्ट हाउसमा बिताएको रातको कुरा पनि मसँग शिएर गर्‍यो । उसका अनुसार -उ र उस्को एकजना साथी रातलाई रङिगन बनाउनका लागि उक्त गेस्ट हाउसमा गएका थिए । उस्ले पनि आफ्नो साथीले झै ४-५ जना केटीहरुको हुलबाट एक्जना आफुलाई मन परेको केटी लिएर कोठामा गएछ । चट्ट केटीले आफ्नो शरीरको तल्लो भागमा लगाएको कपडा फुकालेर उसलाई पनि उसै गर्न भनिछ । उसले पनि त्यसै गरेछ । केटीले उसको लिङगमा कन्डम लगाइ दिएछ र आफु माथि आउन भनिछे । तर मेरो साथीले चाँही केटीलाई नै आफ्नो माथि चढ्न आग्रह गरेछ । केको हुनु ? केटीले त उसलाई मज्जले झपारीछ - तिम्रो माथि चढ्न आएको हो र ? यो बाट हामी शहजै अनुमान लगाउन सक्छौ कि नेपाली यौन बजारको ब्यबस्थापन गर्नु कत्तिको आवश्यकता छ ?